Samsung Galaxy A50: Nkọwapụta, Ahịa na Mwepụta | Gam akporosis
Samsung na-agbanwezi akara ekwentị ya ugbu a. Firmlọ ọrụ Korea na-arụ ọrụ karịsịa iji megharịa etiti ya, ka o wee nwee asọmpi n'ahịa. Otu n'ime ngalaba nke ụlọ ọrụ ahụ chọrọ imezigharị bụ Galaxy A. Maka ugbu a, anyị enweela onye ọhụụ ọhụụ a, Galaxy A50. Edeelarị ya n'ihu ọha.
N'ime izu ndị a anyị nwere ọtụtụ leaks banyere Samsung Galaxy A50 a, site na batrị site na ekwentị ma ọ bụ na akara mkpisiaka mmetụta ọnọdụ na otu. N'ikpeazụ, ngwaọrụ ahụ adịworị gọọmentị, yabụ anyị maara ihe niile gbasara ya. Kedu ihe anyị ga-atụ anya site na etiti a?
Anyị na-eche ihu na etiti etiti na abata na igwefoto okpukpu atọ, na mgbakwunye na ijikọta ihe mmetụta mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo ya, dị ka a tụlere n'izu ndị a. Obi abụọ adịghị ya, otu n'ime ụdị ndị akpọrọ ka ọ chịkwaa akụkụ etiti a na gam akporo maka afọ a.
1 Nkọwapụta Galaxy A50
Nkọwapụta Galaxy A50
Galaxy A50 bụ ezigbo ihe atụ maka mmeghari ohuru nke etiti na anyị na-ahụ na Samsung. Thedị Korea na-ewebata ọkwa n'ụdị mmiri mmiri na ekwentị ya. Na mgbakwunye inwe ọtụtụ igwefoto azụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-azụ ahịa chọrọ n'etiti etiti a. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Nka na ụzụ nkọwa Samsung Galaxy A50
Nlereanya Galaxy A50
Usoro njikwa Ekwenyeghi
Ihuenyo Super AMOLED 6.4 Inch Full HD + 1080 × 2340 pikselụ
Nhazi Egwuregwu asatọ nwere 4 cores na 2.3 GHz na 4 cores na 1.7 GHz
Nchekwa n'ime 64/128 GB (gbasaa ruo 512 GB na microSD)
Igwefoto na-aga n'ihu 25 MP AF f / 1.7 + 5 MP FF f / 2.2 + 8 MP FF f / 2.2
Igwe n'ihu 25 MP nwere f / 2.0
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka agụ ike n'ime ihuenyo Samsung Payaa Bixby Vision Bixby Voice Bixby Home Bixby Nchetara
Batrị 4.000 mAh na ngwa ngwa
Akụkụ 158.5 × 74.7 × 7.7 mm
Ya mere, anyị nwere ike ịhụ na ụfọdụ ihe batara na ekwentị a nke akara Korea etinyebeghị n'ime etiti ya, n'adịghị ka ụdị ndị ọzọ. Ọ na-eche na mbata nke notch na ika, Galaxy M nwere ya, ọ bụ ezie na n'oge a amaghị ya ma ọ bụrụ na a ga-arụ ọrụ a gburugburu ụwa. Anyị nwekwara ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo na Galaxy A50 a.
Anyị nwekwara ike ịhụ na ụlọ ọrụ ahụ na-etinye aka na ọtụtụ igwefoto dị n'etiti ya. Anyị enweworị ụdị nwere igwefoto atọ na anọ na mpaghara ya na ọnwa ndị a gara aga. N'ihe banyere nke a Galaxy A50 hapụ anyị igwefoto azụ atọ, nke doro anya na-ekwe nkwa inye ndị ọrụ ọrụ dị mma. Ọzọkwa igwefoto dị n'ihu kwere nkwa iji nyefee nke ọma na 25 MP.
Abịa na batrị 4.000 mAh buru ibu, nke kwesiri inye ndi oru ezigbo ikike. Maka ugbu a anyị enweghị nkọwa niile gbasara ngwaọrụ. Anyị amaghị ụdị mbipute nke gam akporo ị nwere ma anyị amabeghị data gbasara njikọ ya. Mana anyị kwesịrị ịmata karịa n’oge na-adịghị anya.
Na ụbọchị mmalite nke Galaxy A50 anyị enweghị data. Anyị maara na a ga-enwe ọtụtụ nsụgharị, ebe anyị nwere 4 na 6 GB nke Ram yana yana 64 na 128 GB nke nchekwa. Mana e kwubeghị aha ọnụahịa ma ọ bụ ụbọchị ịhapụ maka ụdị nke Samsung ọhụrụ a.
Ihe niile anyị maara bụ na a ga-ahapụ ya na ọcha, nwa, acha anụnụ anụnụ na coral.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Galaxy A50: Samsung n'etiti ọhụrụ